Ixabiso eliphantsi leMveliso ye-20-26ft ye-HVLS yokuLungisa abavelisi bemisebenzi kunye nabathengisi | Uhlaselo
Imveliso ephezulu yoShishino lwe-20-26ft HVLS yokuLungisa imisebenzi egqibeleleyo
Umthamo omkhulu kakhulu womoya, Ukhuselekile kwaye uqinisekisa
Ukujongana ngokulula neemeko ezigabadeleyo
Eivolumu yomoya enkulu kakhulu , Safe kunye nokuqinisekisa
I-Superstar kunye noluhlu olusebenzayo lusebenzisa umgaqo osebenzayo woQeqeshiso oluVulekileyo oMagnethi ukuguqula umgama ojikelezayo ojikelezayo ube yindawo ejikelezayo yemagneti. Ubuninzi bepali enobubanzi bunokufikelela kwiimitha ezi-8, kwaye ubuninzi bomoya bungafikelela kwi-18660 m3 / min, ngaphezulu komthamo womoya weemveliso eziqhelekileyo ngaphezulu kwe-35%. Inokukhuthaza ukuhamba kokuhamba komoya kwisithuba ngokusebenza okuphezulu, ukufezekisa injongo yokupholisa abasebenzi, kunye nokuphucula inqanaba lokuthuthuzela okusingqongileyo.
I-Bejarm ineminyaka eli-17 yembali yophuhliso lwetekhnoloji, ulawulo olungqongqo lolawulo lomgangatho kunye neenxalenye eziphezulu. Abalandeli bayo bemagnethi abasisigxina banokuthenjwa kwaye bomelele.
Isinyithi Magnetic akuthethi demagnetize
Elungiselelweyo yokusebenza eliphezulu sentsimbi ngemagnethi ngaphandle demagnetization.
Amanyathelo amaninzi okukhusela ukukhusela, ungakhathazeki ngokhuseleko
Zonke iintlobo zeemeko ezigqithileyo zilingisiwe kulingo, kwaye iintlobo ezahlukeneyo zengozi ekusetyenzisweni kwazo ziqwalaselwe kukhuseleko loyilo lomatshini uphela. Yeyenzelwe ukhuseleko oluphezulu kakhulu, ke abasebenzisi banokubeka iingqondo zabo ekuphumleni.
Inqaku ngalinye lokudibanisa lixhotyiswe ngezixhobo zokukhusela kabini;
Amanyathelo okhuselo wombane nolwakhiwo ayilelwe ukunqanda iingozi ezizezesibini.
3. Ukufuma kokusebenza kweemoto kunokufikelela kwi-100%, kungangeni manzi ngokupheleleyo kwaye kungabinabungqina ngothuli.
4. Phantsi kwemeko yomoya owaneleyo, ogqibeleleyo
indibaniselwano yoyilo lomntu olwenziwe ngokobuqu lwee-fan blade zeBejarm kunye nemoto yemagnethi engagungqiyo inokuqinisekisa ukuba i-aluminium magnesium alloy fan blades inobunzima obaneleyo namandla, ukuze ingakhubazeki ngexesha lokusebenza kwaye inengxolo esezantsi kunye nenqanaba eliphezulu lokhuseleko.
Uthotho lweSuperStar-Plus- Amaxesha afanelekileyo okufaka isicelo
Egqithileyo 3.2KW Portable Silent Inverter Petroli Generator BF2250IS
Okulandelayo: Ukusebenza okuphezulu kwi-Industrial 17-24ft HVLS yophahla fan enkulu kakhulu yevolumu yomoya